Ezona Phones zinamandla zi-10 zika-Epreli 2019, ngokwe-AnTuTu | I-Androidsis
Ezona fowuni zinamandla zi-10 zika-Epreli 2019, ngokwe-AnTuTu
Njengesiqhelo, i-AnTuTu ihlala yenza ingxelo yenyanga okanye, endaweni yoko, uluhlu lweetheminali ezinamandla kwintengiso, inyanga nenyanga. Ke ngoko, kweli thuba litsha sikubonisa inyanga ka-Epreli, neyokugqibela evezwe ngumgangatho. Siyakwandisa!
Olu luhlu luye lwatyhilwa kutshanje kwaye, njengoko sibonisa, loluka-Epreli ophelileyo, ke i-AnTuTu inganikezela oku kwinqanaba elilandelayo lenyanga, esiza kulibona ngoJuni. Emva koko ezi Ezona smartphones zinamandla ngo-Epreli 2019ngokweqonga lovavanyo:
Njengoko kunokuchazwa kakuhle kuluhlu, nangona kukwiTshayina, el Xiaomi Mi 9 uHlelo lokuHlola kunye Siyi9 zoqobo ziphezulu, ngamanqaku angama-373,715 kunye nama-373,511 ngokwahlukeneyo, ubuncinci kakhulu, phantse ukungabonakali okungafaniyo phakathi kwabo.
Indawo yesithathu, yesine neyesihlanu kuhlala i Xiaomi Black Shark 2, i Meizu 16s kunye ne-Vivo's IQOO, ene-371,837, 370,306 kunye namanqaku angama-363,360, ngokulandelelana, ukuvala iindawo ezintlanu zokuqala kuluhlu.
Okokugqibela, isiqingatha sesibini setafile senziwe nge Samsung Galaxy S10 + (359,936), iGPS S10 (358,726), ifayile ye IVivo iQOO (354,138), ifayile ye- Nubia Red Magic Mars (310,612) kunye Hlonipha I-20 (306,289), ngolandelelwano olufanayo, ukusuka kwindawo yesithandathu ukuya kweyeshumi.
Los Huawei P30 Baye bashiywa ngaphandle, Into eyothusayo, kodwa iyaqondakala inikwe into yokuba Snapdragon 855 idlulile, phantse kuzo zonke iimeko, Kirin 980 evela kwinkampani yaseAsia. Nangona kunjalo, sinokubona ezi fowuni zibuyele kwinqanaba elilandelayo, kunye nezinye iitermina zokusebenza eziphakamileyo ngokunjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ezona fowuni zinamandla zi-10 zika-Epreli 2019, ngokwe-AnTuTu
IHuawei ibhengeza iifowuni zokuqala zokuphucula ukuya kwi-Android Q
Lonke utshintsho lwabucala luboniswe kuGoogle I / O 2019